.ပိတ်ထားတဲ့ ဘုရားစေတီအတွက် မီတာခသိန်းချီကျခဲ့ကို မှန်းခြေနဲ့ အကုသိုလ်မယူဖို့ပြောလာတဲ့ ကျော်သူ. – Askstyle
.ပိတ်ထားတဲ့ ဘုရားစေတီအတွက် မီတာခသိန်းချီကျခဲ့ကို မှန်းခြေနဲ့ အကုသိုလ်မယူဖို့ပြောလာတဲ့ ကျော်သူ.
ပိတ်ထားတဲ့ ဘုရားစေတီအတွက် မီတာခသိန်းချီကျခဲ့ကို မှန်းခြေနဲ့ အကုသိုလ်မယူဖို့ပြောလာတဲ့ ကျော်သူ
ပရဟိတ မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘာသာရေးနဲ့ ကုသိုလ်ရေးကို အထူးလိုက်စားခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သူက သူကိုယ်တိုင်လည်း ကုသိုလ်ရေးကို အထူးပြုလုပ်သလို အများအကျိုးအတွက်လည်း နိဗ္ဗာန်ဆော်ပြုလုပ်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ကျော်သူက သူတည်ထားတဲ့ ပြည်မြို့အနောက်ဖက်ကမ်းရှိ ပရဟိတတောင်တော်က စေတီအတွက် မီတာခ သိန်းနဲ့ချီ ကျခဲ့တာကြောင့် ထင်ကြေးနဲ့ အကုသုလ်မယူဖို့ အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
“နားကိုမလည်တော့ဘူးဗျာ။ ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘုရားစေတီပုထိုးတွေပိတ်ထားတာတောင် လျှပ်စစ်ဖိုးက တစ်သိန်းခြောက်သောင်း(၁၆၀၀၀ဝိ/-) ဆိုတော့ကာ…။ ပရဟိတတောင်တော်ကညဖက် မီးတွေထိန်ထိန်လင်းနေတာဘဲလို့တော့ မပြောလေနဲ့နော်။ တောင်ပေါ်မီးတွေက ဆိုလာမီးတိုင်တွေဆိုတာကို သတိတော့ပြုပါဗျာ။ ထင်ကြေး၊မှန်းခြေနဲ့တော့ အကုသိုလ်မယူစေချင်ပါ။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျော်သူကတော့ ပြည်မြို့အနောက်ဖက်ကမ်းမှာ သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး (၇) ရက်သားသမီးကောင်းမှူနဲ့ “ပရဟိတတောင်တော်စေတီ” ကိုတည်ထားခဲ့ရာ ကိုဗစ်ကာလမှာ ပိတ်ထားရတဲ့ ဘုရားစေတီအတွက် မီတာခသိန်းချီကျခဲ့တာကြောင့် အခုလိုပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပိတ္ထားတဲ့ ဘုရားေစတီအတြက္ မီတာခသိန္းခ်ီက်ခဲ့ကို မွန္းေျခနဲ႔ အကုသိုလ္မယူဖို႔ေျပာလာတဲ့ ေက်ာ္သူ
ပရဟိတ မင္းသားႀကီး ဦးေက်ာ္သူကေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဘာသာေရးနဲ႔ ကုသိုလ္ေရးကို အထူးလိုက္စားခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာ္သူက သူကိုယ္တိုင္လည္း ကုသိုလ္ေရးကို အထူးျပဳလုပ္သလို အမ်ားအက်ိဳးအတြက္လည္း နိဗၺာန္ေဆာ္ျပဳလုပ္တတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔မွာေတာ့ ေက်ာ္သူက သူတည္ထားတဲ့ ျပည္ၿမိဳ႕အေနာက္ဖက္ကမ္းရွိ ပရဟိတေတာင္ေတာ္က ေစတီအတြက္ မီတာခ သိန္းနဲ႔ခ်ီ က်ခဲ့တာေၾကာင့္ ထင္ေၾကးနဲ႔ အကုသုလ္မယူဖို႔ အခုလိုပဲ ေျပာလာပါတယ္။
“နားကိုမလည္ေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ကိုဗစ္ကာလမွာ ဘုရားေစတီပုထိုးေတြပိတ္ထားတာေတာင္ လွ်ပ္စစ္ဖိုးက တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း(၁၆၀၀၀ဝိ/-) ဆိုေတာ့ကာ…။ ပရဟိတေတာင္ေတာ္ကညဖက္ မီးေတြထိန္ထိန္လင္းေနတာဘဲလို႔ေတာ့ မေျပာေလနဲ႔ေနာ္။ ေတာင္ေပၚမီးေတြက ဆိုလာမီးတိုင္ေတြဆိုတာကို သတိေတာ့ျပဳပါဗ်ာ။ ထင္ေၾကး၊မွန္းေျခနဲ႔ေတာ့ အကုသိုလ္မယူေစခ်င္ပါ။” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေန ေျပာလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာ္သူကေတာ့ ျပည္ၿမိဳ႕အေနာက္ဖက္ကမ္းမွာ သူကိုယ္တိုင္ဦးစီးၿပီး (၇) ရက္သားသမီးေကာင္းမႉနဲ႔ “ပရဟိတေတာင္ေတာ္ေစတီ” ကိုတည္ထားခဲ့ရာ ကိုဗစ္ကာလမွာ ပိတ္ထားရတဲ့ ဘုရားေစတီအတြက္ မီတာခသိန္းခ်ီက်ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလိုေျပာလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။